(Waxaa laga soo toosiyay Midab Takoor)
Midab Takoor waa yasid lagu yasaayo qof kale midabkiisa ama muuqaalkiisa.Midab Takoorka waxaa soo raaca Addoonsi Takoor iyo Quudhsi
Dadka ay soomaalidu takoorto waxa ka mid ah: Midgo, shekhaal, Tumaallo, Gabooye, Yixirro, Yibro, Boon, Eeylo, Xuryeel iyo Low-jir iwm. Dadkan waxa lagu fogeeyaa haybtooda (qolada ay ka soo jeeddaan), waa la haybsoocaa, waxaana lagula kacaa dhaqan qalafsan oo naxariis daran, waxa laga gawdhiyaa dhaqanka guurka, talada dalka, qabaqadda sare ee bulshada sida; maalqabeennada, tijaarta, aqoonyahannada, indheer-garadka iyo maamulka sare ee Dawladda iwm. Waxa horyaalla gidaar weyn oo nusqaan, xaqiraad, bahdil, quudhsi iyo karantiimayn ku dhisan oo aan u oggolaanayn inay bulshada caadiga ah ka mid noqdaan. Iska daa dadkaa in soomaalinimo loo qirsanaadee, xitaa bani’aadanimo looma aqoonsana. Wax liita oo naf aan lahayn oo uraya ayaa loo arkayaa.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Midabtakoor&oldid=196930"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Nofeembar 2019, marka ee eheed 02:00.